Soo-saaraha dareeraha heerkulka dareeraha ee Shiinaha - Soo-saaraha dareeraha heerkulka dareeraha ee tayada - Testeck Co., Ltd.
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka dareeraha > Dareeraha heerkulka dhuumaha
Double taayir dareeraha heerkulka darafta
Dareemuhu waa la kala bixiyaa iyada oo aan istaagin si loo ogaado kala-baxa degdega ah iyo isku-dhafka dareeraha. Dareeraha heerkulka ee qaabdhismeedka tuubbada laba-geesoodka ah ayaa laga qaatay meelaha laga cabbirayo heerkulka hawada, dhuumaha biyaha iyo dhuumaha saliidda.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Dareeraha heerkulka dhuumaha soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Dareeraha heerkulka dhuumaha kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.